3 Sababood oo aad ugu biirtay Socodka si loo Dhammeeyo Gaajada sanadkan - Cunnooyinka Shaagagga
3 Sababood oo loogu biirayo Gaajo Walk to End sanadkan
Ma dooneysaa inaad la bilowdo dhaqan cusub oo Thanksgiving ah qoyskaaga? Isu ururi shaqaalaha isla markaana hoos ugu dhaadhaca subaxda Mall of America ee Thanksgiving-ka oo nagu soo biir Socodka Cunista Gaajada.
Socodka Dhammaadka Gaajada waa socod qoys oo saaxiibtinimo ku dhex socda Mall of America, kaas oo 100% dakhliga ka soo baxa loo geynayo ururada ku sugan magaalooyinka Mataanaha ah ee u heellan la dagaallanka gaajada Markaad ballanqaaddo inaad ku lugeyso Cuntooyinka Lugaha waxaad ka caawin doontaa inaad taageerto gaarsiinta cunnada caafimaadka leh iyo isdhexgalka aadanaha ee waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah.
Waa kuwan 3 sababood oo ah inaad u socoto sannadkan:
Sii intaadan mahadin kahor. Thanksgiving-ka waa wakhti lagu aqoonsado sida aan u nasiib badanahay, iyo in kuwa kale ee nagu hareeraysan aysan noqon kuwa nasiib badan. Socodka waxaad ku caawin doontaa dadka ka tirsan bulshadayada inay helaan waxa qof walba u qalmo, cuntada miiskooda.
Dhacdo weyn oo qoys. Qof kasta oo qoyska ka mid ah wuxuu heli doonaa waqti fiican oo ku dhex wareega Mall of America maalinta Thanksgiving. Waqtiga aad wada qaadan jirteen intaadan bilaabin qodida cashada waxay u abuureysaa qof walba xusuus waarta.
Guba qaar ka mid ah kalooriyada ka hor intaadan tuubin tan. Ma dareemi doontid dambi inaad dib ugu laabaneyso ilbiriqsiyo (ama seddex meelood meel) miiska cashada maxaa yeelay waxaad horeyba u dhameysay jimicsigaaga subaxdii!
Waxaa jira laba qaab oo aad uga qaybqaadan karto:
Ku soo biir kooxdayada! Qaadashada ugu horreysa ee kaliya $25 waxaad kula socon kartaa Cunnada Subaxnimada Thanksgiving-ka Wheels.
Samee koox kuu gaar ah! Isku soo wada duub qoyskaaga iyo asxaabtaada, soco, oo sii Cunnooyinka Lugaha Lugta intaadan mahadcelin.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdada halkan. Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno subaxa Thanksgiving-ka!
Sebtember 20, 2016